I-ColorfulGarden Amakamelo amabili amahle abantu abangu-4
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Jairo
U-Jairo unokuphawula okungu-112 kwezinye izindawo.
E-Colourful Garden House silungiselela ukukwamukela ngayo yonke i-Biosecurity ukuze ikuvikele futhi isivikele ekuthelelekeni kwe-Covid-19, ngoba inhlalakahle yakho nokuphepha kubalulekile kithi.
Siyindlu yesiqhingi enengadi ezungezwe izimbali ezimibalabala, etholakala imizuzu emi-5 ukusuka esikhumulweni sezindiza i-El Embrujo eduze nendawo yesiqhingi sase-Providence, izindawo zokudlela, ama-ATM, izitolo ezinkulu, izindawo zabavakashi ezifana neCrab Cay, ibhuloho labathandi kanye nenhloko kaMorgan eSanta. Iziqhingi zaseCatalina🏝
Kuyindawo emnandi, okujabulisa futhi kumnandi ukuzithola, izivakashi zethu zizokwazi ukujabulela izindawo ezikhangayo zezivakashi eziseduze njengeCayo Carabinha, iSanta Catalina, iMorgan Head, ngaphandle kwenzuzo enkulu ngenxa yokuba seduze isikhungo lapho beyizindawo zokudlela, osokheshi, kanye nezentengiselwano nje jikelele.
Indawo yaseCaballete, ngaphandle nje kokuthi iyindawo ethokozisayo, iyindawo enamasu ngenxa yokuba seduze kwezindawo ezithakazelisayo njengesikhungo, lapho kukhona: izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, ama-ATM, phakathi kwezinye izinto; kungcono nakakhulu "ibhuloho lezithandani" lokuwela umgwaqo uye esiqhingini sase-Santa Catalina, esinikeza umbono omangalisayo we-Providencia, nolwandle oluthulile olugcwele umlando nezimfihlo esingazithola. Awukwazi ukushiya i-Providence ngaphandle kokuvakashela i-Cangrejo Cayo ukuthi uhamba kalula ungafinyelela amaphuzu amaningana ukuze ugibele isikebhe njengezokuthutha.
Kuyintokozo ukukwazi ukwabelana nokuxhumana nezivakashi zethu, ukuxazulula noma yisiphi isidingo, futhi kungumsebenzi wethu ukubahlinzeka ngazo zonke iziqondiso ukuze bazi futhi bajabulele umlingo we-Providence ngendlela emnandi kakhulu njengoba benza. kuyakufanelekela.
Ihambisana nokuqhelelana komphakathi okungamamitha angu-2.
Kuyintokozo ukukwazi ukwabelana nokuxhumana nezivakashi zethu, ukuxazulula noma yisiphi isidingo, futhi kungumsebenzi wethu ukubahlinzeka ngazo zonke iziqondiso ukuze bazi futhi ba…
UJairo Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 68335